10 Kwete-Izvo-Zvisingaonekwi Zviratidzo Zvekuzvipira Nyaya - Ukama
Vanhu kazhinji vanoshuvira kubatana kwehukama kuvabatsira kuti vanzwe vakakwana uye vagutsikana. Vanhu vakasiyana vanoita izvi nenzira dzakasiyana.
Nyaya dzekuzvipira ndeimwe yezvipingamupinyi zvinoverengeka zvinogona kutadzisa vanhu kubva mukuumba mhando, hukama hwakareba nevamwe.
Vanogona kuve mhedzisiro yechinhu chero chipi zvacho chinobva pakurwara nepfungwa kana kuve munhu anopona mukushungurudzika kune yakajeka uye yakapusa sarudzo yekuchengetedza chinhambwe.
Chero chingave chikonzero chingave ichi, zviratidzo izvi zvinogona kunongedzera kune mumwe munhu ane nyaya dzekuzvipira uyo angave asina kugadzirira, achida, kana kugona kugadzira kubatana kwakadaro.
1. Ivo kashoma kugadzira kana kumisikidza zvirongwa vhiki kana mwedzi pamberi.
Nyaya dzekuzvipira dzinowanzo mhanyisa pane kusave nehanya kana kudzivirira hukama hurefu.
Ivo vanowanzorega kufunga zvakanyanya kure kumberi mune hwehukama hwehukama nehukama nehukama nekuti ivo vanoziva kuti vanhu vanowanzo kuuya nekubva kubva kuhupenyu hwavo nguva dzose.
Izvo zvinogona kuratidzirwa munzira iyo munhu akaronga yavo yemahara nguva kana gadziriso yeramangwana - kana kushomeka kwayo. Zvinogona kuve zvinoshungurudza kuyedza kuumba chero marongero ekongiri nemunhu uyu kuitira ramangwana.
2. Vangave neboka rakakura reshamwari dzepedyo, asi vasina shamwari dzepedyo.
Kuvaka ushamwari hwepedyo ndeyekudyara munguva, simba uye simba.
Munhu ane nyaya dzekuzvipira anogona kunzvenga kuita iyo nguva yenguva uye simba rekudyara nekuti ivo vanonzwa kuti hazvigare. Vanogona kunge vari mamabhurufuru ehukama, asi hukama hwavo hwemagariro hunowanzo kuve hwepamusoro pamwe nevanhu vazhinji panzvimbo pehukama hwakadzika nevashoma vakasarudzwa.
Ivo vanogona zvakare kutya izvo izvo zvavanogona kunge vachirasikirwa nazvo, pachinzvimbo chekuve nekwanisi yekupemberera izvo zvavanotova nazvo.
3. Vanowanzove nehukama hupfupi hushoma pane hushoma hurefu.
Kuchengetedza kwenguva yakareba kudanana kunoda kushanda nesimba uye kuzvipira. Kunyangwe vamwe vangazvitsanangure sekushanda nesimba, zvinogona kuve zvinofadza kana muchibatsirana kuita hukama hwakanaka, hune rudo nemunhu anokuremekedza uye anokukoshesa.
Vanhu vane nyaya dzekuzvipira vanowanzo gara mune izvo ruchiva honeymoon phase zvekudanana kana hukama, kusvetuka kubva mazviri apo kupenya kunotanga kupera kutsvaga chimwe chinhu chitsva. Izvo zvinogona kusiya kumashure kweiyo pfupi, ine hukama hukama.
Chimwe chiratidzo cheyambiro kusakwanisa kugamuchira chero mhosva kana mutoro wehukama kana hukama kuparara. Iyo inogara iri mhosva kana zvikanganiso zveumwe munhu, haimbove yavo mutoro.
4. Ivo vanofarira kusada kana kudzivisa mutauro unosanganisira kuzvipira.
Munhu ane nyaya dzekuzvipira anowanzoda kubata zvese nenzira yakasarudzika uye mutauro wavanoshandisa kutsanangura hukama hwavo, kana hukama hwapfuura, kazhinji hunoratidza.
Vanogona kunge vasingade kufunga nezve mumwe-wenguva refu waanodanana naye semukomana kana musikana, vangave vasina kana basa rekusimudzira hukama hwapfuura kufambidzana, vanotsvaga shamwari chete vane mabhenefiti ehukama hukama vasina tambo dzakasungirirwa, kana vanogona mweya mumwe wavo kana vachinzwa zvinhu zvava kuremerwa. Izvi zvinoita kuti vadzivise kutaurirana zvachose.
5. Vanowanzo dzivisa kuzvipira kwavo pachavo, vachiita sevasina kujeka kana kusaenderana.
Kushanda-kuzviparadza kunogona kuve chiratidzo chekuti munhu ane nyaya dzekuzvipira. Vanogona kunge vasina hunyanzvi hwekushandisa nguva, kazhinji vachiratidza kunonoka kana kusatomboita kune zvakabvumiranwa zviitiko.
Izvi zvinopa munhu mukana wekuzvisunungura pabasa rekuchengetedza hushamwari kwenguva yakareba uye hukama nekunongedzera kushayikwa kwehunyanzvi hwekushandisa nguva kana tarisiro dzisina musoro dzeumwe wavo.
Vachawanzova nezvikonzero zvakasiyana zvehunhu uhu hwavanoshandisa kakawanda pane kushanda kugadzirisa nyaya.
6. Ivo vanowanzo kukwezvwa nezvisingawanikwi zvido zverudo.
Kune vamwe vanhu kunze uko vanozviti vanongonakidzwa nevanhu vasingawanikwe.
Isingawanikwe inogona kureva munhu ari mune imwe hukama, parizvino akaputirwa pasi pemitoro ine chekuita nedzemabasa, haana hutano hwepfungwa kana hwepfungwa zvakakwana kuhukama, kana achangobva kupfuura kuparadzana uko vasina kupora kubva pahukama ihwohwo huchipera.
Munhu iyeye anogona kusvetuka kubva kusawanikwa kupwanya kusvika kusawanikwa kupwanya, kutiza kana zvikaita kunge munhu iyeye angave achida kuvapa imwe nguva kana kuva nehukama hwakadzama.
7. Ivo vanonyanya kusarudza mune zvavanofarira, zvese mune shamwari uye nezverudo.
Tarisiro dzakakwirira dzinogona kushanda sedziviriro yakanaka kune munhu ane nyaya dzekuzvipira.
Ichokwadi icho isu chatinogara nacho ndechekuti munhu wese achazove neakanaka uye asina hunhu hunhu pamusoro pavo. Mufaro wenguva refu muhukama uye hushamwari hunouya kuzoshanda kuti uwane nzvimbo imwe chete uye kudzidzira kuregerera kana zvinhu zvikaenda zvisirizvo.
Munhu anonyanya kusarudza mukuravira kwavo muvanhu anogona kunge achiishandisa senzira yekudzivirira, nekuti zviri nyore kuchengetedza vamwe vanhu kuti vasaswedere padhuze kana pasina munhu angakwanise kuzadzikisa tarisiro yavo yemusango.
8. Vanowanzo sunga pamwe chete nemumwe wavo, vasingatombogadziri chero chinhu chakakomba.
Manzwiro anowanzo kudzikisira maonero edu nekutonga, kunyanya mumatanho ekutanga ehukama. Tinogona kutarisa kune mumwe munhu kuburikidza nemagirazi-ane mavara-magirazi, achipa mireza tsvuku isingaonekwe.
Nechokwadi, isu tinofanirwa kushandira kutarisa hushamwari hutsva kana hukama zvakaringana. Munhu iyeye anoda kutandara kana kuenda kunze kwemasikati? Munhu wacho anokuitira nguva here? Kana ivo vanogara vaine chikonzero uye chikonzero chekuti sei vasingakwanise kuungana pamwe kana kuronga zvakare?
Munhu anofarira kukuziva iwe zvirinani uye anoda kuve padhuze newe anozoita zvinhu izvi - asi vanhu vazhinji vanopedza nguva yavo vachimonyorora maoko avo, kuyedza kufunga izvo izvo izvo mumwe munhu zvaari kuda kana zvaasingade. Dai vaida kuvapo, vaizove variko.
9. Vanowanzova varombo kutaura vasinganetsi kuwana.
Panogona kuve nezvikonzero zvinoverengeka zvekusataurirana zvakanaka. Muchirevo chezvinhu zvekuzvipira, ndeimwe nzira yekudzora uye yekudzivirira iyo inobatsira munhu kuchengetedza chinhambwe chinhambwe. Izvo zvinogona kuve mune zverudo kana platonic pfungwa.
Vanogona kuita zvinhu sekusapindura mameseji zvizere, kusapindura zvachose, regai foni yavo iende kuvoice mail uye vasatombotora, kana kumbofona kunze kwekunge vaine chavanoda kubva kwauri.
Kuisa kwavo mari muhukama kana hukama kazhinji hakuna kudzika uye kuzvishandira, uye nzira dzavo dzekutaurirana dzinozviratidza.
10. Ivo vanofarira kuda kudzinganisa kworudo kutsvaga kupfuura kwavanoenda.
Anogara achidanana anorova zvisina chinangwa kubva pahukama nehukama anogona kutya kuzvipira. Ivo vanogona kutobatanidzwa muhukama kwenguva pfupi, dzimwe nguva kunyange kana vhiki, uye vozoisiya ipapo ipapo.
Vanogona kunge vari mhando yekugara ichida kurova kirabhu kana mabhawa, vachitsvaga kwenguva pfupi yakanaka nguva nenguva. Izvo zvinogona kusatombouya kubva kunzvimbo inokuvadza ivo vangangoda kuve nenguva yakanaka pane kubata neese mutoro uyo kuzvipira kwenguva refu kunotakura.
Uye iyoyo yakakosha pfungwa. Kungoti nekuti mumwe munhu ane nyaya dzekuzvipira, hazvireve hazvo kuti chakashata kana chinhu chisina kunaka.
Vamwe vanhu havangodi kusungirirwa kana mune chero rudzi rwekureba-kurongeka nemumwe munhu. Uye izvo zvakanaka. Vanhu vanofanirwa kuve vakasununguka kurarama hupenyu hwavo nemabatiro avanosarudza.
Dambudziko rinouya apo wechipiri anoedza kumanikidza avo maitiro nezvekuti munhu iyeye angave achirarama sei hupenyu hwavo, kazhinji nekuti ivo vachida hukama kana kuzvipira.
Icho chisarudzo chakashata uye chiri kungoendesa kune kusuwa kwemoyo uye kushungurudzika nekuti mapato ese ari maviri haana kufanana peji nezvavanoda kunze kwekudyidzana.
Usatarisira kupingudza kana kuporesa munhu waunofunga kuti ane nyaya dzekuzvipira nekuti anogona kunge asina kana nyaya zvachose. Izvo zvinogona kungova sarudzo yavo pamabatiro avari kuda kuita hupenyu hwavo.
Maitiro Ekukunda Kuzvipira Nyaya
Kana iwe uchifunga kuti iwe unogona kunge uine nyaya dzekuzvipira - kana iwe uchida kubatsira mumwe munhu anozviita - chii chaungaite kuti utarisane nazvo uye wopedzisira uchikunda?
Sezvo nezvakawanda zvinhu, hapana imwe-saizi-inokodzera-mhinduro yese, asi heano dzimwe nzira dzaungakwanise kurerutsa manzwiro aunosangana nawo.
Bvunza kuti nei unazvo.
Izvi zvinowanzo batsira kana iwe uchikwanisa kuona chimwe kana zvimwe zvezvakakonzera kutya kwako kuzvipira.
Zvichida vabereki vako vakaparadzaniswa iwe pawaive mudiki uye izvi zvakakugutsa kuti hukama hwenguva refu hwakafanirwa kukundikana.
Pamwe iwe wakambove nehukama hwepedyo hunopera kamwe kamwe uye izvi zvakakupa kushushikana kwakadai zvekuti iwe haudi kuisa njodzi yakafanana kukuvara zvakare.
Kana iwe une nyaya dzakakomberedza kukwana uye izvi zviri kukonzera kuti iwe uwane mhosva pahukama hwese newawakambosangana naye?
Nekuziva izvo zvingangodaro zvakakonzera kuzvipira kwako phobia, iwe ungawana zvichikwanisika kushanda kuburikidza nemanzwiro ako akakomberedza izvo zvinhu.
Kana iwe usingazive chakakonzera yako chaiwo nyaya kana iwe usati wakagadzirira kutarisana nezvinhu izvo, usatya hako. Iwe unogona achiri kushanda kuti uvandudze mamiriro ako uye nekuchinja maitiro aunofunga nezve kuzvipira.
Iva akatendeseka newe pachako.
Wakazvibvumikisa iwe pamwe nevamwe kuti uri kufara zvakanyanya uri wega here?
Kunyangwe izvi zvingave zvechokwadi kune vamwe vanhu imwe yenguva, zvakakodzera kubvunza iyi pfungwa.
Uri kunyatsovimbika here kwauri kana uri kuzvinyepera wega nezve manzwiro aunoita chaizvo?
Kunyangwe iwe uri munhu anofara uye anogutsikana munhu yakawanda yenguva, pane nguva here dzaunoshuvira mumwe wako?
Uri kuzvinyengedza iwe kufunga kuti haudi mumwe munhu? Kuti iwe nehupenyu hwako makakwana sezvavari…
Kunyange izvi zviri zvechokwadi mune imwe pfungwa, kune imwe nzira yekutarisa nayo.
Ehe, iwe haudi mumwe munhu kuti akupedzise iwe kana hupenyu hwako, asi hupenyu hwako hunogona kugadziriswa mukambani yeumwe.
Iwe unosangana nehupenyu neimwe nzira kana uri muhukama. Zvese zvinhu zvakajeka uye zvine simba paunenge uchizogovana nazvo nemumwe munhu.
Uye hukama kazhinji hunopa mikana yekukura semunhu. Zvinoburitsa zvinhu pamusoro pako zvaungadai usina kumbobvira wawana.
Saka, funga kwenguva refu uye zvakaoma uye bvunza kana iwe usiri kunyatsoda hukama, kana kana iwe wakangozvisimbisa iwe pachako kuti haudi.
Nzwisisa kushushikana kwako kwakakomberedza kuzvipira.
Chero iwe paunosundira kumashure kupokana nekuzvipira, iwe chikamu chinotungamirwa nekuzvidya moyo kwako.
Kana iwe uchikwanisa kuvaona vari pabasa uye unonzwisisa kuti sei vachiita kuti iwe ufunge uye uite nenzira yaunoita nayo, zvinogona kukubatsira iwe kuvadzikamisa uye kurega kuita chero chinhu chisina kunaka.
Kuzvidya mwoyo kwakanyanya kunzwa kunouya patinotarisana nerisingazivikanwe uye risina chokwadi ramangwana.
Panyaya yehukama, izvi zvinoreva kusangana neicho chaicho mukana chekuti chingave chisingaperi.
Uye kuti, kana zvisiri zvechigarire, chii chichazotevera?
Iwe zvakare unofanirwa kubata nezvisingazivikanwe kuti hukama huchave hwakaita sei. Muchagara pamwe chete, kuwana imbwa, kuita vana, kutenga imba?
Iwe uchaita nharo? Ndezvipi zvinotarisirwa zvichaiswa zvakasimba pamapfudzi ako?
Uye, pamwe zvinonyanya kukosha, uchawana here mufaro muhukama pane kubuda mairi?
Iwe haugone kuziva zvinhu izvi kusvikira wave muhukama nemumwe munhu.
Asi tarisa pane imwe nzira: hupenyu husina kuzvipira.
Izvo zvichaita sei?
Iwe unogona kufunga kuti ine chokwadi chechokwadi mairi nekuti iwe une masimba makuru.
Iyo inongova nemhando dzakasiyana dzekusaziva.
Uye kana iwe uchizvichengeta wega kubva muhukama, hauna mumwe wekugovana naye mutoro wekusava nechokwadi uku.
Izvi zvinofanirwa kuzviyeuchidza iwe zvenguva dzose: kana ukasambozvipira, iwe uchagara uchifanira kutarisana neramangwana risingazivikanwe newe.
Iwe uchagara uchifanira kutakura huremu hwezviitiko wega.
Iwe haugone kuvimba nemumwe munhu kuti upinze kana kubvisa chimwe chinhu mundiro yako zvachose.
Izvi hazvirevi kukutyisidzira iwe muhukama nechero nzira.
Izvo zvakagadzirirwa kukuratidza iwe kuti izvo zvisingazivikanwe iwe zvaunofunga zvauri kuchengetedza zvinongotsiviwa nezvimwe zvisingazivikanwe.
Uye izvo nekusazvipira kuchinhu chimwe, iwe uri, nekutadza, kuzvipira kune chimwe chinhu.
Dzidza maitiro ekuita sarudzo uine chivimbo.
Kubatana nepfungwa yapfuura, kushushikana kwako kwakanangana nekuzvipira kunogona kubva mukusagona kwako kuita sarudzo.
Kana iwe ukave wakashanda zvakanyanya ukatarisana nesarudzo yekuti ndiani waungazvipire kwaari uye nguva yekuzvipira, unogona kungorega kuita izvo zvisarudzo zvachose.
Iwe unorasika mu 'chii-dai' uye iwe unopedza kwenguva yakareba uchiongorora mamiriro ezvinhu zvekuti hapana kwaunombosvika maererano nekuwana mhedziso ine mutsindo.
Izvo zvinofanirwa kuzviyeuchidza iwe pachako kuti hapana icho chakadai senge hukama hwakakwana kana mutambo wakaringana maererano nemudiwa.
Ehe, iwe unofanirwa kutarisa izvo chokwadi kuti uone kana iwe uchigovana zvakafanana zvido, tsika, uye zvinangwa.
Ehe, iwe unofanirwa kunzwa kukwezvwa nemunhu uyu, unakidzwe kuva navo, uye uone hunhu hwakanaka hwaanahwo.
Ehe, iwe unogona kuzvichengetedza kubva kune vangangoita vanodzvinyirira kana vanoshusha vadyidzani nekutarisa iwo matsvuku mireza.
Asi, pakupera kwezuva, kana chinenge chinhu chose chiri kutaridzika zvakanaka, uye paine zvinhu zvidiki diki zviri kukutadzisa, unofanirwa kufuratira zvinhu izvi uye utange kusvetuka kwekutenda.
Kana iwo ari madiki madiki, ivo havazove nebasa zvakanyanya mumufananidzo mukuru.
Kuita danho rekuzvipira kunoda kuti iwe ushinge. Zvinoda kuti iwe ugamuchire chokwadi chemamiriro ezvinhu uye chehukama hwakawanda.
Iwe ungangoona iwe kuti mukuita sarudzo, iwe unonzwa pfungwa yekusununguka uye kudzikama kubva pakuziva kuti iwe urimo mairi kwenguva refu yekutakura.
Kusvetukira murukova rerudo rutsva, usingazive kwainogona kutora iwe kunonakidza.
Usatarise pane yekusingaperi.
Iwe unorega kuzvipira kune mumwe munhu nekuti iwe unonzwa kuti icho chinofanirwa kuve chisarudzo iwe chaunonamira nacho nekusingaperi?
Unogona kuva mu hukama hwakazvipira uye zvakadaro iva wakasununguka kushandura pfungwa dzako kana mamiriro ezvinhu akamuka anozvipembedza zvechokwadi.
Izvi hazvikupe mukana wekuti utize kuzvipira iyo nguva yaunorova bump mumugwagwa.
Asi zvinoreva kuti hauna kusungirwa kuchisarudzo ichi zvachose.
Saka usatarise zvachose kana iwe uchida kuzvipira kune mumwe wako.
Tarisa pane apa uye ikozvino. Tarisa pane pfupi pfupi. Ehe, nyangwe tarisa pane iyo yakareba tambo kune imwe nhanho.
Ingo usazvishingise iwe kuti haugone kupunyuka mamiriro ezvinhu kana zvinhu zvikave zvisina hutano.
Deredza zvaunotarisira nezvekuti hukama 'chaihwo' hunofanira kunge hwakaita sei.
Ndezvipi zvako zvekuzvipira mhedzisiro yevamwe zvikuru zvisingaitiki tarisiro yehukama hwakajairika uye hune hutano hunofanira kutaridzika sei?
Kana usati wambobvira waita hukama hwakakomba, zvinogona kunetsa kufungidzira kuti chii chaizvo senge.
Unogona kurarama uine chimwe chiratidzo chakanangana chehukama hwakakwana pakati pevanhu vaviri uko kuwirirana nerunyararo zviripo nguva dzese.
Asi izvi hazvisi izvo hukama hwakafanana nehukuru.
Kana iwe ukatiza pane chero chiratidzo chekunetseka, hauzombowana rudo rusingaperi.
Ukama haugadzirise matambudziko ako ese.
Hollywood kudanana hakuwanzo kuvapo munyika chaiye.
Iwe uchafanirwa kupa zvibayiro pane dzimwe nguva.
Izvi ndizvo zvazviri.
Iwe unganzwa uchinetseka zvishoma kunzwa izvi, asi usazvibvumidze iwe pachako kunyura zvakanyanya neimwe nzira futi.
Hukama hune hutano hune zvakawanda zvakanaka nguva, rudo, uye kunakidzwa.
Ivo vanozoita kuti iwe unzwe wakasarudzika unofara nguva nenguva.
Ingo rangarira izvo, kazhinji yenguva, hupenyu hunoitika.
Hukama chingori chikamu chehupenyu uye chinofanira kugadzira nzvimbo yezvimwe zvese zvimwe zvikamu.
Dzimwe nguva mumwe wako anogona kushushikana nebasa.
Dzimwe nguva unogona kurwara.
Dzimwe nguva kuda uye kudanana kunofanirwa kutora chigaro chekumashure kune zvimwe zvinomanikidza uye zvinoshanda zvinhu.
Izvi hazvireve kuparara kwehukama.
Izvi zvinoratidza kuti hupenyu huri kutora nzvimbo uye hukama huripo pakufamba. Izvo zvinongotora chigaro chekumashure izvozvi uye ipapo.
Saka kana iwe uchiramba uchisvetuka kubva muhukama nekuti hausi kugara uchitsvoda kana kubata maoko kana kuwana mufaro wakachena, ziva kuti une tarisiro isingaite uye shanda kugadzirisa izvo.
Gara pahukama kana mashiripiti apera.
Kana iwe ukapinda muhukama, chete kuti unzwe kunge iwe uchida kubuda mazviri zvakare munguva pfupi yapfuura, edza kunamatira pairi kwenguva yakareba sezvazvinogona.
Hukama chinhu chaunokura kuva. Iwe unoenderana navo. Asi hausi kuzogara wakasununguka ipapo.
Iwe unogona kunzwa kurwadziwa kukura.
Idzi kazhinji kazhinji inguva dzaunogona kunge uchinzwa kuda kumhanya.
Edza kuramba uchitaura wega kuti, 'Kwasara vhiki imwe chete.'
Uye kana svondo iroro rasvika pakupera, iti zvakare.
Nevhiki roga roga rinopfuura, iwe unozonzwa uine chokwadi chekuti hukama chinhu chaunoda kuramba uchitsigira nacho.
Iwe uchanzwa wakasununguka uye chishuwo chekugumisa zvinhu chinopera.
Rimwe zuva, iwe uchaona kuti hauchadi kuzviudza kuti ugare rimwe vhiki.
Uchadaro kuda kugara imwe vhiki… uye mberi.
Ita chiito kusvikira iwe uchinzwa kuzvipira.
Kutevera pane iyo yapfuura poindi yekupa nguva yehukama, iwe unogona zvakare kuyedza kuita nenzira yaungaite kana iwe uchinzwa zvizere kuzvipira.
Ipo dzimwe nguva pfungwa dzako nemanzwiro zvichitungamira zviito zvako, zvakapesana zvinogona zvakare kunge zviri izvo.
Zviito zvako zvinogona kuchinja mafungiro nemafungiro ako.
Saka kana usati uchinzwa kuzvipira kune mumwe munhu, edza kuita nenzira inoratidza kuti uri.
Ita zviratidzo zvekudanana, ona mumwe munhu kakawanda sezvaunogona, taura nezve chimwe chinhu chaungade kuita pamwe chete mumwedzi 'nguva.
Heck, uto gadzira mamwe marongero akasimba echinhu icho kana uchikwanisa.
Ita mumwe wako - kana waungangodanana naye - chinhu chekutanga muhupenyu hwako uye uvakurudzire kuti vaite zvakafanana.
Pakupedzisira, iko chaiko kuita kwekuva vaviri uye kubata mumwe nemumwe sekunge iwe uri mumwe kuchakupa chokwadi chekunzwa kwako kwechokwadi kumunhu uyu uye kuita kuti zvive nyore kuzvipira zvizere.
Kurukura kutya kwako kuzvipira nemumwe wako.
Hukama hwemarudzi ese hunoshanda zvirinani kune wese munhu anobatanidzwa kana paine kutaurirana kwakajeka, kwakasununguka, uye kwechokwadi .
Uye kunyangwe zvingaite sekunge kutaura nezvezvinhu zvako zvekuzvipira nemumwe wako wekupedzisira ndicho chinhu chekupedzisira chaunofanira kuita, zvinowanzo batsira.
Kuvenga kwako kugadzirisa pasi chinhu chavanogona kunyatsocherechedza zvakadaro, saka nekukurukura nezvazvo navo, unogona kuwana zvinhu munzvimbo kugadzirisa zvingaitika mhedzisiro.
Kune imwe chete, zvinogona kuwedzera kunzwisisa kwavo uye kunzwira tsitsi kwauri uye nekuchinja nzira yavanogona kusarudza kuita kune chimwe chinhu chaunoita.
Kana iwe uka 'nyangarika' kwechinguva chidiki, semuenzaniso, zvinogona kuvabatsira kuti vaone izvi zvazviri uye vasafunge kuti hauna basa nazvo.
Zvinogona kuvabatsira kuti vave nemoyo murefu newe uye voramba vachishingirira maererano nekuve ivo vanosundira hukama kumberi pakutanga.
Uye kune zvakwakanakira iwe, zvakare. Kutaura nezvematambudziko ako kunogona kunzwa sekunge uremu hwasimudzwa kubva pamafudzi ako.
Kuziva kuti ivo vanoziva uye vanonzwisisa nenzira yaunombofunga kana kunzwa nayo zvinogona kukuita kuti uve wakasununguka nekuzviratidza iwe panguva dzino.
Uye izvi zvinogona kutungamira kuhurukuro dzinovaka dzinogona kugadzirisa tsinga dzako nekukudzosera mune imwe pfungwa yakanaka zvine chekuita nehukama.
Kana iwe ukaramba kuzvipira nekuti unotya mumwe munhu achiputsa moyo wako, mumwe wako anogona kukusimbisa kana achiziva kuti uku kutya kwechokwadi kwauri.
Kutendeseka kunogona kuenda nenzira yakareba mukudzivirira mhando yemhirizhonga uye kusahadzika uko dzimwe nguva kunogona kupinda mupfungwa dzako.
Nekudaro, usatya kutaura pachena uye nekuvimbika nemumwe wako uye uzviite zvine hungwaru muhukama hunotanga - usati wawana mukana wekudzoka pazviri pasina kana neshoko.
Kudanana Nemumwe Munhu Ane Nyaya Dzokuzvipira
Kana iwe uri kufambidzana nemumwe munhu uye ivo vachiratidzira mazhinji ezviratidzo zviri pamusoro kana kuti vakangokuudza iwe nezvezvinhu zvavo nekuzvipira, chii chaunofanira kuita?
Paunenge uchipinda muhukama nemunhu akadai seizvi zvinogona kunge zvisiri nyore nguva dzose, usafunge kuti hazvina kukodzera kuedza.
Vanhu ava havasi vasina hanya uye havasi kutambisa nguva yako.
Ivo vanongova nemadhimoni avo sezvatakaita tese.
Hezvino zvimwe zvinhu zvaunogona kuita kuti ugadzirire iwe uye upe hukama mukana wakanakisa.
Pachave nenguva apo mumwe munhu angangoda kurega, kurega, kuenda nenzira yavo vega.
Kana iwe uchifungidzira kuti vari kuita pane yavo yakadzika-kutya kutya kuzvipira, iwe unofanirwa kuvarwira.
Ivo vanogona kunge vari kutsvaga nzira iri nyore yekubuda, asi ivo zvakare vanotsvaga kujekesa uye chokwadi.
Kana ivo vachiziva kuti une hanya navo zvechokwadi uye kuti unotenda muhukama uye nekwaunogona kusvika, vanozokuvimba.
Dzimwe nguva, ivo vanongoda kuti mumwe munhu atore uye avaudze kuti, hongu, zvinhu zvinonetsa dzimwe nguva, asi vanozoita zvirinani kana vakurega iwe uchivabatsira.
Varatidze kuzvipira kwako kuhukama.
Kuti uvabatsire nekuzvipira kwavo, iwe unofanirwa kuve wakajeka nekristaro neyako.
Kana iwe waifanira kurwira kuti uzvichengete muhukama, saka iwe watove watoita basa rakakura, asi pane zvimwe zvinhu zvaunogona kuita.
Gadzirira kuve iye anoita zvirongwa munguva pfupi, yepakati, uye yakareba.
Vaudze kuti uri kuenda kunodya pane rimwe zuva. Vaudze kwauri kuenda uye nguva ipi. Ita kuti zvese zvive nyore sezvazvinogona kwavari. Famba uchienda kumba kwavo kana kubasa uye uvatore pane kusangana navo ipapo.
Kana nguva yakwana, zivisa ivo kushamwari dzako (uye pakupedzisira mhuri, asi izvo zvinowanzouya gare gare).
Itai kuti zvizivikanwe kwavari kuti munovaona mune ramangwana renyu.
Asi varerukire mukati uye usavavhunduse.
Vanhu vane kuzvipira phobias dzimwe nguva vanoona izvo zvinhu zvinokurumidza kukurumidza kubva kufambidzana kune hukama hwakakomba .
Izvi zvinovaisa parutivi uye zvinovapa chikonzero chekutiza.
Saka nepo uchifanira kuve wakajeka mukuzvipira kwako kwavari, edza kusavaita kuti vanzwe vachikurumidza kuita zvakafanana.
Tora matanho emwana maererano nekuvaka hukama. Hongu, edza kuvaona kazhinji, asi vape nguva nenzvimbo yekufema uye vazive maitiro ekuve muhukama.
Usangoerekana waratidza rwendo rwekuenda uye usataure chero chinhu chakakura sewanano kana vana.
Ramba uchienda pane misi kunyangwe iwe iva wega vaviri. Chengetedza zvinhu zvinonakidza uye zvishoma.
Tarisa uone zviratidzo zvekuti vari kuzviwana zvakanyanyisa uye wozodzora zvakare pa throttle.
Zviratidzo izvi zvinowanzo sanganisira maitiro avo ekutaurirana.
Kana vakatanga kuita senge vakavharika, nemhinduro mupfupi kumibvunzo yako kana maburi marefu munguva vasati vapindura mameseji, vanogona kunge vachinzwa kumanikidzwa.
Saizvozvo, kana vachiratidzika kunge vakatsauswa kana kuvhiringidzika mushure menguva yakareba mukambani yako, vangangoda imwe nguva yavo vega.
Taura kunzwisisa kwako.
Kana munhu aine nyaya nekuzvipira, vanogona kunzwa sekunge hapana anozvinzwisisa.
Uye saka vanovanza kure manzwiro avo uye vovabvumidza kuti vanyatsodzika pasi pechiso kusvikira ivo rimwe zuva vaputika uye munhu iyeye anomhanya kubva pahukama.
Kana iwe uchigona kuvaita kuti vanzwe kunzwisiswa, iwe unogona kuvapa ivo vakasununguka kuti vakurukure nyaya dzavo newe.
Dzimwe nguva vanogona kutanga kutaura nezvenyaya iyi, ipapo unogona kunyatsoteerera uye uchivavimbisa kuti uchaita zvese zvaunogona kudzikamisa kushushikana kwavo.
Kana vasina kubvuma pachena kuti ivo vanozvipira-phobe, vanogona kunge vachitya zvakanyanya kutaura nezvazvo kana pamwe vasingatomboziva kuti ivo ndevamwe.
Chero nzira, kusimudza nyaya yacho kunogona kuve kunonetsa.
Imwe nzira ndeyekutaura nezvehukama hwavo hwekare (uye hwako hwekuyera). Vabvunze kuti sei vasina kushanda.
Nzwira tsitsi navo nezvekupera kwakaita hukama hwavo.
Iva akatendeseka navo nezve magumo ehukama hwako hwekare uye kuti iwe hauna kungonzwa sei kuti aive munhu chaiye kana nguva.
Kana vakagona kuenderana nezvauri kutaura, vanonzwa kusununguka kuvhura.
Hunza kuzvipira mberi semusoro wenyaya uye uvazive kuti zvinotonzwa kukuomera iwe dzimwe nguva.
Izvi zvinogona kushomeka kudzivirirwa kwavo uye kuvaita kuti vataure nezvenyaya dzavo pachena.
Asi usasundidzire nyaya zvakanyanya kana vasingaoneke sevanoda kutaura nezvayo.
Iva nemoyo murefu navo.
Kunyanya pane zvese, iwe unozoda moyo murefu kana uchizobudirira kugadzirisa nyaya dziripo mumwe munhu nekuzvipira.
Ivo havagone kutarisirwa kuti vakunde kutya kwavo kana kunetseka mukati menguva pfupi yenguva, saka iwe uchafanirwa kuvapa imwe nhanho pane imwe nguva.
Edza kufungidzira maitiro aungade kuti mumwe munhu akubate iwe kana iwe uchinetseka nenyaya dzakafanana.
Izvi zvinokubatsira iwe kuramba wakashinga mukuzvipira kwako kune mumwe wako.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuita nezve yako kana nyaya dzekuzvipira kwemumwe wako?Kutsvaga rairo yeukama nyanzvi kunogona kubatsira mumamiriro ezvinhu akadai, uye hapafanire kuve nekunyara mukukumbira vamwe. Nyanzvi yakadzidziswa inogona kupa zano rakagadzirirwa kuti ikubatsire kukunda matambudziko anounzwa nenyaya dzekuzvipira kuhukama.Saka wadii kutaura online kune imwe yehunyanzvi kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kubatsira kukutungamira pane izvi. Simply.
3 Zviratidzo Zvekuvimba Nyaya Uye Maitiro Ekuti Uzvikunde
20 Zviratidzo Mumwe Munhu Ane Nyaya Dzakasiya
Zviratidzo 7 Iwe Newaunofambidzana Navo Hazvienderane
Unogona Kugadzirisa Ukama-Hwehukama Hwehukama Kana Iwe Unofanirwa Kuhugumisa?
6 Makuru Zviratidzo Mumwe Wako Anokuona Sewe Sarudzo, Kwete Chekutanga
Kuuraya vanhu kwakasimba kupfuura uturu
sasha mabhanga vs alicia gava
kumisa zita kudana muhukama
sei kuudza iye anofarira
tsananguro yekuve murudo vs rudo